ndewo na mcpa
Na-achọ ebe nwa gị nọ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nnabata 2021?
Anyị na-aghọta na ọ dị mkpa ka ị họrọ ụlọ akwụkwọ ziri ezi maka nwa gị , n'ihi ya, anyị na-ahọrọ ka ị na-eleta anyị n'oge ụbọchị akwụkwọ ka ị nweta ezi nghọta nke anyị ebumnobi, ụkpụrụ na atụmanya anyị.
Ọ ga-amasị anyị ịkpọ gị ka ị bịa legharịa anya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ọhụrụ anyị na-arụ ọrụ.
Biko kpọọ 0161 202 8989
Nursery - Ngwa maka nnabata na ọta akara nke na MCPA ga-emeso site na ulo mmuta, ọ bụghị site na mpaghara ikike. Ndị anamachọihe kwesịrị itinye akwụkwọ ozugbo na MCPA maka ebe ụmụaka nọ. Enwere ike ịme ngwa maka ebe ọnyà oge ọ bụla ka nwa gị gụchara ụbọchị ọmụmụ nke abụọ. Mpempe akwụkwọ maka mbido Septemba / oriri ga-adị na Academy na njedebe nke February. A ga-atụle ngwa n'oge mgbe emechara usoro nkenye ma ọ bụrụ na enwere ebe ọ bụla fọdụrụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Academy – Manchester Communication Primary Academy ga-anabata 60 ụmụaka nnabata kwa Septemba. A chọrọ ndị nne na nna / ndị nlekọta niile ka ha tinye akwụkwọ n'ụlọ ha LA gbasara ebe Ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ha na-etinye n'ọrụ dị. Ndị bi na Manchester ga-etinye akwụkwọ na Manchester LA. Ndị LA ga-ejikọta ndị ọchịchị nnabata ndị ọzọ na Manchester na LA ndị ọzọ ebe achọrọ. Manchester LA ga-agwa nne na nna/ndị nlekọta n'akwụkwọ maka nsonaazụ ngwa ha.
Ụmụntakịrị anyị ugbu a na-atọ ụtọ, mmụta na-amasị ha ma na-enwe ọganihu dị mma. Gịnị ma ị bịa hụ n'onwe gị, biko kpọtụrụ
Ekwentị: 0161 202 8989
Oriakụ Wong ga-enwe obi ụtọ ịhazi nleta ma ọ bụ kwado gị na usoro ngwa